Samsung Galaxy A5 (2015) na emelitere na gam akporo Marshmallow | Akụkọ akụrụngwa
Samsung Galaxy A5 (2015) emelitere na gam akporo Marshmallow
N'oge a, okwu a "karịa oge karịa" adịghị mma maka mmelite nke ngwaọrụ nke South Korea firm Samsung. Ọnụ nke arụpụtara na 2015 malitere ịnata gam akporo Marshmallow mbipute site na OTA. Mmelite ọhụrụ a nke na-amalite ịgbasa site na ngwaọrụ a nwere ike ịbụ njedebe ikpeazụ kachasị nke ngwaọrụ ahụ na-atụle na gam akporo Nougat na-adịwanye nso na ngwaọrụ ndị ọzọ. Eziokwu bu Companylọ ọrụ ahụ ekwughikwa na nke a ga-abụ mmelite kachasị ọhụrụ na 5 Samsung Galaxy A2015, ma ọ bụ ihe ijuanya na ọ na-abịa ugbu a mgbe anyị nwere usoro ọzọ nke sistemụ arụmọrụ gam akporo nso.
Okwu nke mmelite dị mgbagwoju anya na gam akporo na ọ naghị eju anyị anya na ụdị a abịarutela maka ngwaọrụ ndị a. Ma ịhapụ ma ma ọ bụ na nke a ga-abụ nke ikpeazụ nke Samsung ngwaọrụ dị n'etiti nke rụpụtara nke ọma n'etiti ndị ọrụ ga-emelite, mbipute a malitere iru ndị ọrụ ọ ga-ekwe omume na ọ bụrụ na ị nwere ihe nlele a nke smartphone ị ga-enweta ya n'oge na-adịghị anya.
Versiondị Marshmallow bụ otu n'ime ihe ịrụ ụka adịghị ya na-eme ka ngwaọrụ ahụ rụọ ọrụ nke ọma n'ụzọ ọ bụla, ọ na-eme ka nnwere onwe nke ngwaọrụ ahụ dịkwuo mma ma nke a bụ ihe na-adabara adaba na ọdụ nke na-ebu ma na-ebuputa batrị ogologo oge ... N'ihi ya, na-a atta ntị Ntọala> Banyere ngwaọrụ> Mmelite ngwanrọ nke Galaxy A5 gị n'ihi na n'oge na-adịghị anya ị nwere ike imelite ya na Android Marshmallow.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Samsung Galaxy A5 (2015) emelitere na gam akporo Marshmallow
Juan Angel Galicia dijo
Ì chere na e nwere ihe ngwọta nye nsogbu m?
Kemgbe m zụtara ngwaọrụ m na-echere mmelite ahụ, nke fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 1 afọ na ọkara ọ dịghị abịa.
Mgbe ị na-achọ mmelite na ntọala, ọ na-ekwu na usoro nke ngwaọrụ agbanweela n'enweghị ikike, nke pụtara ìhè karịa kemgbe ị nwetara ngwaọrụ ahụ na nkọwa nke igbe ọ sịrị weta android kitkat 4.4 mana n'eziokwu ọ bịara na android lollipop 5.0.2.
Echere m na ị nwere ike inyere m aka n'oge na-adịghị anya, ekele ...
Zaghachi Juan Angel Galicia
7 akụkọ na-adọrọ mmasị banyere Pokémon Go
Foto nke Samsung Galaxy Note 7 otu ụbọchị tupu ebido ya